Home Wararka Wafdi ka socda Mareykanka oo gaaray Hargeysa
Wafdi ka socda Mareykanka oo gaaray Hargeysa
Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandgiga ee Mareykanka ayaa maanta gaaray Magaalada Hargeysa ee xarunta Somaaliland, xili ay diyaarad millatari ay kasoo dejisay Garoonka diyaaraha Cigaal ee magaaladaas, waxaana ay ka yimaadeyn dalka Jabuuti.
Warar ayaa sheegaya in Wafdiga uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada Maraykanka ee uu saldhiggoodu yahay Jabbuuti, waxaana lagu wadaa inay Mas’uuliyiintaan ay kulamo la qaataan Mas’uuliyiinta Sare ee Somaliland, iyaga oo kala hadli doona arrimo dhowr ah.
Sidoo kale, wafdiga ka socdo dowladda Mareykanka ayaa la tilmaamay in ay booqasho ku tagi doonaan Dekadda magaalada Berbera taas oo ay gacanta ku heeyso Shirkadda DP World ee aga leeyahay dalka imaaraadka, sidoo kale uu kuyaallo saldhigga Ciidanka Imaaraadka.
Previous articleKheyre oo sameeyay Ballanqaad u eg midkii Farmaajo ee 2017.
Next articleFarmajo Khudbadiisa Is Sharrixidda Muxuu ku sheegay oo aadan Ogeyn?
Farmaajo oo laga mamnuucay in uu dul maro hawada Kenya